Myat Shu - ထင်ရာမြင်ရာ
You are here : Myat Shu » Archives for ထင်ရာမြင်ရာ
Published By Myat Shu On Thursday, September 11th 2014. Under ထင်ရာမြင်ရာ, မျက်ရှု, သုတ, ဆောင်းပါး
Published By Myat Shu On Monday, May 6th 2013. Under ထင်ရာမြင်ရာ, မျက်ရှု
Picture credit to rakanindobhasa.blogspot.com ယခုနှစ်ပိုင်းကလေးမျာသည်ကား ကျွန်ုပ် ဂျက်ကွမ်းခြံကုန်းအဖို့ ရောင်းပန်းဝယ်ပန်း အလွန့်အလွန်လန်းသည့် နှစ်ပိုင်းကလေးများပင် ဖြစ်ချေပေသည်တမုံ့။ ဟုတ်ကဲ့။ ဂျက်ကွမ်းခြံကုန်း မပါလျှင် အဘယ်နေရာမှာမှ ပွဲမစည်တော့ဟု ဆိုရလောက်အောင်ကိုပင်လျှင် ထားဝယ်ဘက်မှာဆိုလည်း ဂျက်၊ မြစ်ကြီးနားဘက်မှာဆိုလည်း ဂျက်၊ မူဆယ်ဘက်မှာဆိုလည်း ဂျက်၊ တာချီလိတ်ဘက်မှာဆိုလည်း ဂျက်၊ ရခိုင်ရိုးမပေါ်မှာ ဂျက်၊ ပုံတောင်ပုံညာတစ်လွှားမှာ ဂျက်၊ ငပလီသောင်ယံမှာ ဂျက်၊ မောင်းမကန်ကမ်းခြေမှာ ဂျက်၊ အို…. တစ်ရက်ပြီး တစ်ရက် ဂျက်ပြီးရင်း ဂျက်ဖြစ်၍ နေတော့ပေချေရာ ဂျက်ခေတ်ရောက်ပြီဟုပင် တင်စားရတော့မတတ်ပေပါတည်း။ တီးလိုက်ပါတဲ့ လက်ခုပ်သံများသည်ကား အရပ်ဆယ်မျက်နှာ မဟာစကြာဝဠာ တစ်ခုလုံးဘ၀ဂ်ကိုပင် ဖုံးလွှမ်း၍ သွားတော့မတတ် ဖပ်ဖပ် ဖပ်ဖပ်နှင့်။ ဂျက်ကွမ်းခြံကုန်းမှ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Tuesday, October 16th 2012. Under ထင်ရာမြင်ရာ, မျက်ရှု
www.infed.org ၀န်ကြီးတစ်ခါပြောင်း..ပညာရေးစနစ်တစ်ခါပြင်တဲ့..ပြင်ညာရေးလို့ အရပ်ထဲမှာ အသောဖောက်ကြတဲ့ အခြေခံပညာရေးစနစ်ကို ထုံးစံအတိုင်း ခေတ်နဲ့အညီ ပြောင်းဖို့ ပြင်ကြရပြန်ပါပြီ။ ကောင်းမယ်ထင်လို့ လုပ်ကြည့်ကြပေမယ့်...မိဘတွေ ကျောင်းသားတွေဘက်က ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတဲ့ အခါမျိုးမရှိခဲ့တဲ့ စမ်းသပ်ခံပညာရေးစနစ်ဖြစ်ခဲ့တာ ငြင်းလို့မရတဲ့အချက်တစ်ရပ်ပါ။ (၄)တန်းရောက်မှ အေဘီစီဒီ စသင်ရတဲ့ခေတ်မျိုးလည်း တွေ့ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ငါးပြားနဲ့ ဆယ်ပြားပေါင်းရင် ဘယ်လောက်ရလဲ-ဆိုတဲ့ သင်္ချာသင်ခန်းစာကို ကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာပြထားတဲ့ မှုန်ဝါးဝါး ငါးပြားစေ့ ဆယ်ပြားစေ့ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး မအူမလည်ဖြစ်ရတာ ကြုံဖူးမှာပါ။ အဘိုးအဘွားတွေရဲ့ အံဆွဲတွေဆီက ငါးပြားစေ့ ဆယ်ပြားစေ့အဟောင်းလေးတွေ ရှာကြရတာ၊ ပိုက်ဆံလည်းရှိ..သားသမီးလည်း ဂရုစိုက်နိုင်တဲ့မိဘများကြတော့ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးပြေးပြီး ငါးပြားစေ့ ဆယ်ပြားစေ့အဟောင်းလေးတွေ ဈေးကြီးပေး ရှာဝယ်ကြပြီး လက်တွေ့ရှင်းပြကြရတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ မိဘများမှာ ကျောင်းသားတစ်ယောက်အတွက် တစ်နှစ် တစ်နှစ် ကုန်ကျရတဲ့စရိတ်က မနည်းပါဘူး။ ကိုယ့်တတ်နိုင်လို့ ကျောင်းထားတာရှိသလို၊ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Friday, September 28th 2012. Under ထင်ရာမြင်ရာ, မျက်ရှု
picturesoftheplanet.com သီတင်းကျွတ်ဖို့က တော်တော်လေး လိုသေးတယ်။ ဗျောက်အိုးသံတွေကတော့ နားမခံနိုင်အောင်ပါပဲ။ နည်းပညာတွေ တိုးတက်လာလို့လားတော့ မသိ၊ ဒီနှစ် ဗျောက်အိုးတွေ မီးရှူးတွေက တော်တော် အသံကျယ်လွန်းတယ်။ ဗျောက်အိုးသံနဲ့ မတူဘဲ လက်နက်ကြီးသံ၊ မိုင်းခွဲတဲ့အသံမျိုးတွေ ဖြစ်နေလေတော့ ၈၈-အရေးတော်ပုံကာလပဲ ပြန်ရောက်နေသလို၊ ကလေးဘ၀က ပြည်နယ်ကြီးတစ်ခုမှာ နေခဲ့ရဖူးတဲ့အချိန်ပဲ ပြန်ရောက်သွားသလို စိတ်ထဲ ရောက်ရောက်သွားတယ်။ ဆိုးတာက ညသန်းခေါင်သန်းလွဲလည်း ဗျောက်အိုးတွေ မီးရှုးတွေ ထထဖောက်တာက အိပ်မောကျနေတဲ့ ကလေးတွေ အဘိုးအဘွားတွေကို အလန့်တကြား ဖြစ်စေတာပါပဲ။ အခုနေတာက ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အဓိကရ အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံကြီး တစ်ရုံရှေ့မှာဆိုတော့ လူကောင်းတွေတောင် ဒီလောက် စိတ်ညစ်ညူးရတာ အသည်းအသန် လူနာတွေ၊ နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့ လူနာတွေ ဘယ်လိုနေကြမလဲဆိုတာ တွေးပြီး ... Continue Reading
*ယနေ့ အဟိ လွှတ်တော်သို့ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးသော်တာဆွေ မတက်ရောက်၊ မယားနှင့် စိတ်ကောက်၍ အရက်သောက် လွန်သွားသောကြောင့်ဟု လိုလို... သတင်းဖြစ်ပွားနေသည်။ အထူး လျှို့ဝှက်ချက်ကြီး ဖြစ်၍ ပေါက်ကြားလျှင် သက်ဆိုင်ရာတို့ကို ရာထူးဖြုတ်ပစ်မည် ဟူ၍လည်း ကြားသိရ၏။ * ရှင်မောဂ္ဂလန်ရိုက်သည့် ခိုးသား ၅၀၀ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာ။ * ဂြိုလ်တုတွင် လူထည့်လွှတ်မည်။ အဟိ လွှတ်တော် ဖွင့်လျှင် ဖွင့်ချင်း အဟိ ၀န်ကြီးချုပ်၏ အတွင်းဝန်က ဦးသော်တာဆွေသည် ယနေ့ ခင်မျိုးချစ်၊ ငွေတာရီတို့နှင့် ကမ္မဌာန်းထိုင်လိုက်သွားသဖြင့် လွှတ်တော်သို့ မတက်ရောက်ကြောင်း ပြောရာ... အတိုက်အခံ အမတ်အချို့က “ ယုံ... ယုံသေးဘူး”။ အချို့ကလည်း “ဟုတ်စေဦးတော့ အရက်သောက်ပြီး မီးစတစ်ဘက် ... Continue Reading
ယဉ်ကျေးမှုကပ်ပါးများ၊ အုန်းဆီ ၆၀သားနဲ့…
Published By Myat Shu On Monday, September 5th 2011. Under ထင်ရာမြင်ရာ
ယဉ်ကျေးမှု ကပ်ပါးများ... မန္တလေးမြို့ တရုပ်တန်းက အ၀ိန်ကိုးတိုက်မှာ မဟာဂီတသမားတွေ စုပြီး တီးမှုတ်နေကြတော့ မြို့မအဖွဲ့က လူတွေလည်း ပါတယ်။ “ ပန်းမြိုင်လယ်” ကို တီးကြဆိုကြသတဲ့။ အဲဒီမှာ မြို့မငြိမ်းက ပန်းမြိုင်လယ်ကို ဘင်ဂျိုနဲ့ လိုက်တီးရင်း သူက တစ်ဝက်သံ (1/2 Note) တွေနဲ့ စမ်းတီးကြည့်တာကိုး။ ဒီတော့ ဦးချစ်ဖွယ်က... “ မင့်ဟာကြီးနဲ့ ဒေါလံဒေါ်လံ မလုပ်စမ်းပါနဲ့ မောင်ငြိမ်းရာ” လို့ ဟန့်လိုက်တယ်။ မြို့မငြိမ်းက “ မလုပ်ပါဘူး ဦးလေးချစ်ရ” လို့ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Thursday, August 25th 2011. Under ထင်ရာမြင်ရာ
သာယာသော တနေ့တွင် ရောင်းရင်းဘက်ကြီး ထွန်းဦးတယောက် မမျှော်လင့်ဘဲ ကျွန်တော်၏ အိမ်သို့ ရောက်လာခဲ့လေသည်။ “ဟာ.. ထွန်းဦးကြီးပါလားဟေ့၊ လာကွာ .. ထိုင်အုံး၊ မင်းနှယ်ကွာ (ကြက်ပျောက် ငှက်ပျောက်) ဘယ်ရောက်နေသလဲကွ..” “ငါ.. တပ်မတော် ကြက်ဘဲမွေးမြူရေးစခန်းမှာ တာဝန်ကျနေတယ်။ မင်္ဂလာဒုံမှာပေါ့ကွာ..” “အေးကွာ.. ရောက်တဲ့အခိုက် စကားလေး ဘာလေးပြောရင်း အေးအေးဆေးဆေး စားပြီးမှ ပြန်တာပေါ့ကွာ၊ ဟာ ဒါက ဘာထုပ်ကြီးလဲကွ…” “ငါ ဒီကနေ့ မင်းအိမ်မှာ ချက်ပြုတ်ပြီး ပျော်ပျော်ပါးပါး စားဘို့ ခြံထဲက ကြက်တကောင် လည်လိမ်ပြီး ယူလာတာ…” “မင်းနှယ်ကွာ… ကြံကြီးစည်ရာ၊ အေးလေ.. (ကြက်ယူလာပြီးမှတော့ မောက်လှီးပြီး ကြက်စာခွံ့) ဆိုသလို မင်းဟင်းနဲ့ မင်းဘဲ ပြန်ကျွေးရမှာပေါ့ကွာ.. ဟဲ.. ဟဲ…” ထို့နောက် ကျွန်တော်လည်း ... Continue Reading
ပလုံးပထွေး ဗရချာကာလ အခြေအနေပြ ဖတ်စာ
Published By Myat Shu On Friday, August 5th 2011. Under ထင်ရာမြင်ရာ
ဗရုတ်သုတ်ခဘွဲ့ရ ဗရောက်ဗရက်ဆြာကြီး မောင်ကျပ်ခိုး ဗျစ်ရည်သောက်စဉ်ကာလတွင် ငါးပါးမှောက်သော ဉာဏ်အမြင်ဖြင့် စီရင်အပ်သော ပလုံးပထွေး ဗရချာ ကာလ အခြေအနေပြ ဖတ်စာတည့်။ ရွေးကောက်ပွဲကာလ နီးကပ်လာပြီဖြစ်သဖြင့် မြောက်မြားစွာသော ကြွေးကြော်သံတို့ကို ကြားရလေပြီ။ ဆင်းရဲသားများကို ကယ်တင်အံ့ ဟူသော အသံကြောင့် မောင်ကျပ်ခိုး အတော်ပင် အားတက်မိ၏။ ထို့ကြောင့် မောင်ကျပ်ခိုးသည် ဆင်းရဲသားဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံချက်အား အဘယ်ဌာနတို့တွင် ရယူရမည်နည်းဟု စုံစမ်းမိသေးသည်။ (ယခုတိုင် စုံစမ်းဆဲဖြစ်သည်။ ရှာဖွေ၍ မတွေ့သေးပါ။ သိရှိပါက လက်ကိုင် စကားပြောခွက်အမှတ် ၀၉-၉၉၉၉၉၉၉၉ မှ တဆင့် မောင်ကျပ်ခိုးအား ဆက်သွယ် အကြံပေးနိုင်ပါသည်။ နေရာကျလျှင် ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပါမည်။) မည်သည့်အမတ်လောင်းကမျှ သူဌေးကြီးများကို ကူညီစောင့်ရှောက်မည်ဟု မဆို။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစား ခွဲခြားသော ... Continue Reading
ကျနော်နှင့် ဒေါသ ရသ
Published By Myat Shu On Thursday, July 14th 2011. Under ထင်ရာမြင်ရာ
(၁) မိန်းမ ၃ ယောက်တိတိနှင့် ပတ်သက်ပြီးသော အခါ ကျနော်သည် အရင်ထက် ၃ ဆ ရိုင်းပျနေကြောင်း တခုသောနေ့၌ ဆင်ခြင်မိသည်။ ထိုနေ့သည် သတိမထားပေမယ့် ၁၃ ရက်နေ့ ဖြစ်ပါသည်။ (၂) ချစ်ခြင်းသည် ရိုင်းပျစေသလော၊ ကျနော် မထင်ပါ။ သို့သော် မိန်းမနှင့် ယောက်ျား ဦးနှောက်မတူ၊ ရင်ဘတ်မတူခြင်းသည်လော၊ ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ထင်ပါသည်။ ကျနော်သည် မဆဲတတ်၊ သို့သော် သူနှင့်တွေ့တော့ စိတ်က အလိုမကျ၊ ဘယ်လိုက ဘယ်လို ဆဲမိသည် မသိ။ ကျနော်က သူ့ကို နားလည်ရန် ကြိုးစားနေစဉ်မှာပင် သူ၏ အတွန့်တက်မှုများကို ကျနော်က ဒေါသဆင့်မိကာ နားမလည်ခြင်းပေလော။ ဖြစ်နိုင်သည် ထင်ပါသည်။ ကိုယ်က စိတ်ဖိစီးမှုတွေနှင့် ပင်ပန်းနေသည်။ သူက ... Continue Reading